Rasaasa News – Xadhiga Reer Miyiga oo Koradhay Degaanka Somalida Ethiopia
Xadhiga Reer Miyiga oo Koradhay Degaanka Somalida Ethiopia
on May 3, 2012 12:00 am
Jijiga, May 3, 2012 [ras] – Waxaa magaalooyinka degaanka ku xidhan dad reer miyi ah oo badan, saababta xadhigooduna yahay magaalada ay yimaadeen. Dadkaas reer miyiga ah waxay qabaan dhibaato iyo tacadi badan oo laga yaabo in ayna cidna la socon jirabka haysta.
Dadka reer miyiga ah waxay magaalooyinka u yimaada dano kala duwan sida, xanuun, wax iibsi iyo qaraabaysi. Dadka reer miyiga ah ma haystaan waraaqo aqoonsi ah, waxayna ka cabsadaan dadka magaalada degan su,aalaha la waydiiyana si argagax ah ayey uga jawaabaan.
Magaaliyinka degaanka waxaa si xoog leh oo aan nidaam sharciyeed waafaqsanayn uga hawl gala ciidanka booliska gaarka ah, kuwaas oo hore gacan bir ah ugu qabtay dadweynaha degaanka si xoog lehna looga cabsado.
Ciidamada Booliska ayaa kolka ay arkaan ruux magaalada ku cusub oo aan kalsooni badan lahayn waydiiya aqoonsi, in kasta oo qaarkood kolka ay u gartaan in ruuxu reer miyi yahay ay ka faa,iidaystaan. Kolka dad labisan oo qorya wata ay qabtaan ruux reer miyiga ah wuu cabsadaa, sidaasi ayey ciidanka boolisku ugu maleeyaan sharwade.
Dadka reer miyiga ah ee shaki loo qabto waa la xidhaa, cid ka daba timaadana ma jirto iyaguna isma difaaci karaan ugu dambaynatana waxaa loo dhaadhiciyaa xabsi.
Mar marka qaar waxaa dhacda in Booliska qaarkooda xun ay lacag waydiistaan kolka ay ka waayaana ay dhahaan aanaa garanaya oo waa nabad diidka.
Dadka reer miyaga ah ee ku nool degaanka Somalida Ethiopia waxay qabaan dulmi aan cid ogi jirin, kaas oo ay ku hayaan booliska gaarka ah.
Waxaa na loo sheegay in dad badan oo reer miyi ah cabsi ay ka qabaan magaalooyinka ay arad iyo gaajo la joogaan miyiga.
Arinkan waxaan filayaa in ayna la socon masuuliyiinta amaanka ee degaanka Somalida Ethiopia, waxayna u baahan tahay in si deg deg ah wax laga qabto.